Mpempe akwụkwọ mkpuchi nke China Magnet Chalkboard, Igwe Ọdụdọ Magnetik
Guangzhou New Magnetics Technology Co.,Ltd [Guangdong,China] Ụdị ahịa:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Onye na-emepụta ihe:11% - 20% N'ezie:ISO9001, RoHS, Test Report Nkọwa:Magnetik Whiteboards, Akwụkwọ ndọta ndọta,Magnetik Chalkboard,Mgbapụta Ọdụdọ Magnetik,Blackboard Magnetik,
Home > Ngwaahịa > Magnetik Whiteboards
Ngwaahịa nke Magnetik Whiteboards , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Magnetik Whiteboards , Akwụkwọ ndọta ndọta suppliers / factory, wholesale high-quality products of Magnetik Chalkboard R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Whiteboards friji mkpuchi nwere nnukwu ndọta magnetik
Emegide Glare Matte Finish Projector Whiteboard
Whiteboards friji mkpuchi nwere nnukwu ndọta magnetik Igwe njupụta friji GRWT-NM50 bụ ụdị bọọdụ na-agbanwe agbanwe, nke dị mfe, gbabaa, kpara akpa, ma ọ bụ nwee ike ịbugharị n'ime ụdị ọ bụla. Ichekwa ohere ma nyefe ya nfe. N'otu oge ahụ, Ọ dị mfe iji wụnye ma dochie ya na ihe eji emepụta ihe n'ihi ndọta...
Ụlọ Akwụkwọ Ego Na-enweghị Nzuzo Na-enweghị Njọ Nkebi No.BCKP-NM50 bọọdụ magnetị bụ ụdị ntụpọ nwere ike ịkpụ, dị mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, mechie ya, ma ọ bụ nwere ike tinye ya n'ime ihe ọ bụla. Ịchekwa ohere na ibu ngwa ngwa. N'otu oge ahụ, ọ nwere magnetism, dị mfe ịwụnye ma dochie ya na ígwè...
Igwe Igwe Igwe Ntucha Na-eme Ka Nzuzo Mara Nkebi Nke Na-enye DiyC-RM60 magnetik whiteboard bụ ụdị agbaala dị nro, dị mfe ịkpụ, ehicha, kpara akpa, ma ọ bụ nwee ike tinye ya n'ime ihe ọ bụla. Ịchekwa ohere na ibu ngwa ngwa. N'otu oge ahụ, ọ nwere magnetism, dị mfe ịwụnye ma dochie ya na ígwè materiel. Dị ka...
Klas Ụlọ akwụkwọ Green Blackboards maka Sale Ihe nkedo nke NGCKP-NM50 magnetic board bụ ụdị nke na-acha ọkụ na-acha ọkụ, nke nwere ike ịkpụ, na-ehicha, nke gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ nke nwere ike ịmịnye ya n'ime ihe ọ bụla. Ịchekwa ohere na ibu ngwa ngwa. N'otu oge ahụ, ọ nwere magnetism, dị mfe ịwụnye ma dochie...
Emegide Glare Matte Finish Projector Whiteboard Nkebi NJMMWW-NM50 magneton whiteboard bụ ụdị nke na-acha ọkụ na-acha ọkụ, dị mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, ma ọ bụ nwee ike ịmịnye ya n'ime ihe ọ bụla. Ịchekwa ohere na ibu ngwa ngwa. N'otu oge ahụ, ọ nwere magnetism, dị mfe ịwụnye ma dochie ya na ígwè...
Bulk Mini A4 Magnetic White Writing Board for Fridge A4 size magnetik whiteboard bụ soft softboard, mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, coiled, ma ọ bụ nwere ike machined n'ime fọrọ nke nta ọ bụla ụdị. N'otu oge ahụ, ọ nwere magnetism, dị mfe iji wụnye ma dochie ya na metal materiel, dị ka ngwa nju oyi. Dị ka...
Ihe dị iche iche dị iche iche na-agbanwe agbanwe maka maka ire ere Nkebi Nkeji NGGRWT-NM50 magnetik bụ ụdị ntụpọ na-agbanwe agbanwe, dị mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, mechie, ma ọ bụ nwere ike tinye ya n'ime ihe ọ bụla. Ịchekwa ohere na ibu ngwa ngwa. N'otu oge ahụ, ọ nwere magnetism, dị mfe ịwụnye ma...
China Magnetik Whiteboards Ngwa
Akwụkwọ ndọta ndọta
Akwụkwọ ndọta ndọta ndọta bụ otu ụdị bọọdụ ndị na-agbanwe agbanwe. Ọ dị mfe ịkpụ, gbarọ agbagọ, kpuchie ya, ma ọ bụ nwee ike ịbugharị ya n'ụdị ọ bụla. Yabụ enwere ike ịmegharị ya ka ịchekwa ohere ma buru ibu n'ụzọ dị mfe.
Magnetik Whiteboard Ibé akwụkwọ dị ukwuu magnetik ịbịaru osisi na mere adịchaghị PITA na roba magnet, ezi ihu igwe resistance.It bụ c ompatible maka ọtụtụ ụdị pen, dị ka akọrọ ehichapu whiteboard welara, mfe dee na ehichapụkwa. Maka mkpịsị akwụkwọ akara agba nkịtị, a ga-ehichapu akara n’ime otu ọnwa. Ọ bụrụ n ’akara a na-apụ na bọọdụ ọcha ruo ogologo oge na enweghị ike ihichapu, biko jiri ihe ọcha ma ọ bụ mmiri ọholicụholicụ na-egbu egbu pụọ.
Dabere na magnetik ụkpụrụ, anyị nwere ike ịdị mfe ịwụnye Igwe Ọdụdọ Magnetiki na elu ndọta nwere ndọta. Naanị tinye ya na ezigbo ihe ndọta, dị ka bọọdụ bọọdụ ochie ma ọ bụ nzu. Enweghị mkpa ntu na wụnye, dị mfe iji dochie enweghị nsị.
Nkụzi nkuzi na-enweghị ntụpọ
Akwụkwọ mpịakọta Matte White White maka nkuzi na ide ihe akọwapụtara maka nkuzi na-enweghị ntụ na ụlọ akwụkwọ. O nwere ike imeghari ka odide na nhichasị ụdị nke mkpịsị akwụkwọ dị iche iche, yabụ, dee ọfụma ọfụma wee hichaa enweghị ntụ na nsị. Nwere ntụpọ ndọta dị elu, adsorption siri ike, nwere ike ịdụnye ya ozugbo n'elu chalkboard ochie iji mezuo ebumnuche kwalitere chalkboard ochie na maglọtiiki ọhụrụ.
Matte White Magnetik Whiteboard mpempe akwụkwọ bụ oru ngo-ike na erasable sọrọ-use whiteboard film. A na-etinyere ya n'ọfịs, ụlọ akwụkwọ na gburugburu ebe obibi ọdịbendị, ichekwa ohere na ọnụ ahịa.
Magnetik Whiteboards Akwụkwọ ndọta ndọta Magnetik Chalkboard Mgbapụta Ọdụdọ Magnetik Blackboard Magnetik Magnetik Whiteboard A3 A4 Magnetic Whiteboards